Mpempe ike & mpụga Mdị M - mgbasa mgbasa dị iche iche maka mmanụ dị Mkpa | AromaEasy
A na-eji Mdị M eme ihe naanị na South Africa, Swaziland na Lesotho. (Pịa Ebe a maka ndepụta zuru oke nke mba niile na-eji ụdị M)
Ihe nkwụnye a yiri onye India ụdị D ikwunye, mana nko ya bukwara nke ukwuu. Mdị M bụ plọg amị 15, ọ nwekwara atọ okirikiri nke na-etolite triangle. Akụkụ etiti ụwa dị 28.6 mm ogologo ma nwee dayameta nke 8.7 mm. Udiri 7.1 mm na pini na-anọpụ iche bụ 18.6 mm ogologo, na etiti ndị dị obosara ha. Oghere dị n'etiti etiti ahụ n’agbata pining na etiti etiti ahịrị ahụ na-ejikọ ike abụọ ahụ bụ 25.4 mm. Plugdị South African nke M nke mgbe ochie nwere mkpuchi aka na mpechi aka iji gbochie ịkpọtụrụ onye na-ejikọta ya na mberede ka itinye ya na ntinye. Ọ bụ ezie na ụdị D a na-eji ya na India na Nepal, a na-ejikwa ụdị M maka ngwa buru ibu. Sofọdụ soket n'elu ebe ahụ nwere ike were M ụdị abụọ ụdị D plọg. A na-ejikwa Mdị M na Israel na United Arab Emirates maka akụrụngwa dị egwu dịka eriri ikuku na-eme ka ọ dị mma (n'ọnọdụ ebe ejiri mgbakwunye mgbidi tinye na ntọala raara onwe ya nye) na ụfọdụ ụdị igwe ịsa ahụ. Na UK, ụdị M ka bụ ọmarịcha plọg maka nrụnye ihe nkiri, n'agbanyeghị mbọ iji gaa mba ụwa acha anụnụ anụnụ- na-acha ọbara ọbara na-acha uhie uhie ọrụ mmepụta CEE.
Plọgị ike na mpụga Ldị L